MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward Sone Sone Lin Lin Max Pack Faqs mm - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
စုံစုံလင်လင် Max ပက်ကေ့ချ်
၁။ စုံစုံလင်လင် Maxi Pack ဆိုတာ ဘာလဲ?
ဒေတာပမာဏအများကြီးနဲ့ ခံစားခွင့်အများကြီးကို ပက်ကေ့ချ်တစ်ခုမှာ ရယူချင်တဲ့သုံးစွဲသူတွေအတွက် MPT မှ စုံစုံလင်လင် Maxi Pack ကိုမိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ စိတ်ကြိုက်သုံးနိုင်တဲ့ Facebook, Mobile Legends, Viber, Instagram, JOOX ဒေတာတွေအပြင် အခြားအင်တာနက်အသုံးပြုမှုအားလုံးအတွက်ဒေတာ၊ MPT ဖုန်းအချင်းချင်း အသက်သာဆုံးနှုန်းထားဖြင့် ခေါ်ဆိုခွင့်၊ ဖုန်းဘေလ် ၁၀၀၀ကျပ်ပါ ရရှိပြီး ရက်ပေါင်း (၃၀) အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။
9498 Ks •အကန့်အသတ်မရှိ ဒေတာ (Facebook, Mobile Legends, Viber, Instagram, JOOX)
•MPT ဖုန်းအချင်းချင်းခေါ်ဆိုခွင့် [၁ မိနစ် (၅) ကျပ် (အခွန်မပါနှုန်းထား) ဖြင့်]
•ဖုန်းဘေလ် (၁၀၀၀) ကျပ် (၃၀) ရက် MPT4U app
၂။ ပက်ကေ့ချ်ဈေးနှုန်းမှာ အခွန်ပါဝင်ပြီးဖြစ်ပါသလား?
ပက်ကေ့ချ်ဈေးနှုန်းမှာ အခွန် (၅%) ပါဝင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။
၃။ ဘယ်သူတွေ ဝယ်ယူနိုင်မှာလဲ?
MPT မှ ဆွေသဟာ/ရှယ်ပြော/ရွှေစကား အစီအစဉ် ရယူထားသော GSM/WCDMA prepaid စနစ် လက်ရှိ အသုံးပြုနေသူများ ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ Postpaid, CDMA, Base Tariff နှင့် လက်ရှိ အသုံးပြုခြင်းမရှိသူများ ဝယ်ယူနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
၄။ Facebook Data က အချိန်အကန့်အသတ်နဲ့လား? Videos တွေကြည့်လို့ရမှာလား?
ဟုတ်ကဲ့၊ Facebook မှ Video များကို အချိန်အကန့်အသတ်မရှိ စိတ်ကြိုက် ကြည့်နိုင်မှာပါ။ Facebook Data ကို Facebook App/ Browser မှ Facebook (ပြင်ပ links များမပါဝင်) နှင့် Messenger (Voice, Video calls များမပါဝင်) အတွက် အချိန်အကန့်အသတ်မရှိ အပူအပင်မရှိ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Voice call, video call များနှင့် Facebook မှတစ်ဆင့် click နှိပ်ပြီးပြင်ပ Websiteများ၊ link များကိုဝင်ရောက်အသုံးပြုခြင်းများအတွက် ၀ယ်ယူထားသော Data Pack (သို့မဟုတ်) Pay-As-You-Go နှုန်းထားဖြင့် ကောက်ခံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
၅။ Viber Data ကို ဘာတွေသုံးလို့ရမှာလဲ?
Viber Data ကို Voice, Video call များမှလွဲ၍ အချိန်အကန့်အသတ်မရှိ စိတ်ကြိုက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Voice, Video calls များ အသုံးပြုခြင်းများကို ၀ယ်ယူထားသော Data Pack (သို့မဟုတ်) Pay-As-You-Go Rate ဖြင့် ကောက်ခံသွားမှာပါ။
၆။ အကန့်အသတ်မရှိ Mobile Legends ဒေတာကိုသုံးဖို့ သတ်မှတ်ထားသော ဒေတာကန့်သတ်ချက်ရှိပါသလား?
မရှိပါ။ အကန့်အသတ်မရှိ Mobile Legends ဒေတာကို ဂိမ်းကစားရန်အတွက် အပူပင်ကင်းစွာ အကန့်အသတ်မရှိအသုံးပြုနိုင်မှာပါ။ သို့သော် ဂိမ်းအတွင်း Streaming ပြုလုပ်/ ကြည့်ရှုခြင်း၊ ဂိမ်းအတွင်းဆက်သွယ်ပြောဆိုခြင်းနှင့် ဂိမ်းကစားခြင်းအတွက်မဟုတ်သည့် အခြား အသုံးပြုမှုများ အတွက် ၀ယ်ယူထားသော Data Pack (သို့မဟုတ်) Pay-As-You-Go နှုန်းထားဖြင့် ကောက်ခံသွားမှာပါ။
၇။ On-net mins pack တစ်ခုဝယ်ထားပြီး စုံစုံလင်လင် Maxi Pack ကိုလည်းဝယ်ထားပါတယ်။ MPTဖုန်းအချင်းချင်း ဖုန်းခေါ်ဆိုပါက မည်သည့် pack မှကျသင့်မှာပါလဲ?
On-net mins pack နှင့် စုံစုံလင်လင် Maxi Pack နှစ်ခုစလုံးဝယ်ယူထားပြီး MPTဖုန်းအချင်းချင်း ဖုန်းခေါ်ဆိုပါက On-net mins pack မှ အရင် ကျသင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။
၈။ ဖုန်းဘေလ်လက်ကျန် ၂၀၀၀ကျပ်နဲ့ စုံစုံလင်လင် Maxi pack မှ ဖုန်းဘေလ် ၁၀၀၀ကျပ်ရှိနေပါတယ် (စုစုပေါင်းဖုန်းဘေလ် ၃၀၀၀ကျပ်)။ MPTဖုန်းအချင်းချင်းခေါ်ဆိုပါက ၁ မိနစ် ၅ ကျပ်နှုန်းနဲ့ ဖုန်းဘေလ်လက်ကျန်ထဲက ကျသင့်မှာပါလား?
ဟုတ်ကဲ့။ On-net mins pack ဝယ်ယူထားခြင်းမရှိပါလျှင် MPTဖုန်းအချင်းချင်း ဖုန်းခေါ်ဆိုပါက (၁) မိနစ် (၅) ကျပ်နှုန်း(အခွန်မပါ) နဲ့ pack သက်တမ်းမကုန်မချင်း ဖုန်းဘေလ်လက်ကျန်မှ ကျသင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။
*224# ကို ခေါ်ဆိုပြီး ပက်ကေ့ချ်ပါ ခံစားခွင့်များ၏ လက်ကျန်ပမာဏနှင့် သက်တမ်းကို စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။
၁၀။ MPT ဖုန်းအချင်းချင်း ဖုန်းခေါ်ဆိုရင် ဘယ်လောက်လဲ?
စုံစုံလင်လင် Maxi Pack ကိုဝယ်ယူပါက MPT ဖုန်းအချင်းချင်းကို အသက်သာဆုံးနှုန်းထား [၁ မိနစ် လျှင် (၅) ကျပ်နှုန်း (အခွန်မပါ)] ဖြင့် ခေါ်ဆိုနိုင်မှာပါ။
၁၁။ ဒီဇင်ဘာလ (၈) ရက်နေ့တွင် စုံစုံလင်လင် Mini Pack ကိုဝယ်ယူခဲ့ပြီး ဒီဇင်ဘာလ (၁၈) ရက်တွင် စုံစုံလင်လင် Maxi Pack ကိုဝယ်ယူထားပါတယ်။ MPT ဖုန်းအချင်းချင်းခေါ်ဆိုပါက ဘယ်နှုန်းထားနဲ့ ကျသင့်မှာပါလဲ။
သုံးစွဲသူများသည် MPT ဖုန်းအချင်းချင်းခေါ်ဆိုပါက စုံစုံလင်လင် Maxi Pack ဝယ်ယူထားသည့်နေ့မှ သက်တမ်းကုန်ဆုံးချိန်အထိ တစ်မိနစ် (၅) ကျပ်နှုန်း (အခွန်မပါ) ဖြင့် ခေါ်ဆိုနိုင်မှာပါ။
၁၂။ ဝယ်ယူတဲ့ အကြိမ်အရေအတွက် ကန့်သတ်ထားပါသလား?
အကြိမ်အရေအတွက် အကန့်အသတ်မရှိ ဝယ်ယူနိုင်ပြီး ခံစားခွင့်များကို နောက်ဆုံးသက်တမ်းအထိ သက်တမ်းတိုး ပေါင်းစည်းအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
၁၃။ တခြားသူများသို့ လက်ဆောင်ပေးလို့ ရပါသလား?
ရပါတယ်။ တခြားသူများသို့ လက်ဆောင်ပေးလိုပါက MPT4U app (သို့) *9498# မှတစ်ဆင့် အမှတ်စဉ် “2. Gift/ 2. လက်ဆောင်ပေးမည်” ကို ရွေးချယ်ပြီး လက်ဆောင်ပေးမည့် ဖုန်းနံပါတ် ကိုရိုက်နှိပ်ပြီး လက်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။
၁၄။ ပရိုမိုးရှင်းကာလက ဘယ်အထိလဲ?
ပရိုမိုးရှင်းကာလမှာ ၂၀၂၀ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၁၈)ရက်နေ့မှ ထပ်မံမကြေညာခင်အချိန်အထိ ဖြစ်ပါတယ်။